waxaan www.almancax.co, Waxbarshada Jarmalka ee Turkiga tan iyo 2006 iyo maanta Jarmalka Fiisooyinka, Ruqsadaha waxay u adeegaan sidii Kalfadhiyo iyo adeegyo xalin oo ku saabsan dhibaatooyinka ay la kulmaan Turkida Jarmalka.
Almancax waxay ka kooban tahay kumanaan dukumiinti boggag kala duwan iyo noocyo kala duwan oo loogu talagalay qof kasta oo isticmaala.
Waxaad ku heleysaa macluumaadka aad u baahan tahay barashada luqadaha ajnabiga.
Bilowgii 2000-meeyadii, markii nidaamka waxbarashada ee asynchronous-ka cusub laga wada hadlay lana hirgaliyay, almancax ahaan, waxaan ku hirgelinaynaa waxbarashada luqadaha qalaad nidaamkan markii ugu horreysay dalkeenna. Nidaamkan waxbarasho, ee kaqeybgalka uu ku faafo waqtiga, wuxuu ardayda ka soocayaa dhibaatooyinka waqtiga iyo meelaha. Waxay u oggolaanaysaa iyaga inay raacaan muxaadarooyinka kana qayb galaan doodaha markasta iyo meel kasta oo ay doonaan. Fagaareyaasha Almancax sidoo kale si taxaddar leh ayaa loogu diyaariyay doodaha iyo wadaagga noocaas ah.
almancax, iyo sidoo kale content ballaadhan ee golaha, dhammaan noocyada kala shaqayn lahaa ee barteyaalka kulan Jarmal luqadda, web iyo codsiyada mobile, muxaadarooyin ku qoran, muxaadarooyin video, layliyo, waxa ku jira dokumentiyo kala duwan iyo tobanaan sida kun oo content.
oo leh almancax; Waxaad bilaabi kartaa ka xoq si aad u barato Jarmal, waxa aad diyaarin kartaa aqoontaada jira, dugsiga iyo hesho macluumaadka lagama maarmaanka u ah cilmi-baarista, Jarmal, waxaad ku tababaran kartaa, waxaad baran kartaa waxa aad la yaabi ku saabsan Jarmal iyo Germany, xal u heli karo imtixaanada Jarmal ciyaari karo kulan, aad hadli kartaa. Koobikaro waxa ay gaaraan dhammaan noocyada kala duwan ee macluumaadka aad raadinayso Jarmal, halkaas oo aad naftaada hagaajin karo.
Intaa waxaa dheer, keligaa kuma tihid sameynta waxyaalahan oo dhan; ma ahan oo keliya afarta gees ee Turkiga, waddan kasta oo Yurub ah, qodobbada kaladuwan ee adduunka, kula wadaagaya isla ujeeddada, kumanaan Turki ah ayaa sidoo kale halkan ku barta Jarmalka, waxay xallinayaan dhibaatooyinka halkan.
Sidoo kale noo forum ay helaan macluumaad ku saabsan Germany, aqoon in Germany, undergraduate, qalin, sayidkayga, hesho macluumaadka ku saabsan fursadaha PhD, A1 la diyaarin kartaa imtixaanada sida A2 iyo galaya, kuwaas oo baaritaano ka hor iyo in macluumaadka alabilirsiniz.forum badan saaxiibo ku guuleystay Germany baasaboorada kuwa ku talo jiray inuu, nidaamka fiisaha, hawlgallada isukeenidda qoyska, fadhiyada qaadashada, ogolaashaha shaqada ee Germany, adigoo isticmaalaya liisanka darawalnimada ka soo Turkey, nidaamka fiisaha dalxiiska a qaadan kartaa macluumaadka aad u arrinta of socday sida arday ku jira Germany iyo kulmaan yararlanabilirsiniz.y si waxaad la wadaagi kartaa waayo-aragnimadaada mawduucyadan iyo siin macluumaad muhiim ah dadka cusub.
barxad halkaas oo xog, waxbarasho, wadahadal, wadaagid, waxqabad, ixtiraam, cilmi baaris, wada shaqeyn waa la isku keenaa oo dhammaan noocyada aqoonta waa la gaari karaa!
Kaliya kuma siinno macluumaad ku saabsan afafka qalaad kaqeybgalayaasha madasha, waxaan sidoo kale ka caawinnaa dhibaatooyinka ay kala kulmaan dalalka Yurub (gaar ahaan Jarmalka). iyo maxay yihiin astaamaha dhaqanka, su'aalo badan iyo dhibaatooyin ayaa sidoo kale looga doodaa golayaasha almancax.
Casharrada jarmalka ee qoraalka iyo mootada,
Noocyada hadalka Jarmalka,
Gabayada Jarmalka, sheekooyinka, maahmaahyada, sheekooyinka,
Su'aalo kala duwan iyo jawaabo ku saabsan naxwaha,
Ereyga Online-ka iyo cinwaannada waxtarka leh,
iyo dukumeentiyada noocyo badan oo kala duwan sida aan halkan lagu qori karin.
Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, waa inaad dib u eegtaa qaybaha kale ee golaha almancax.
Waad ku mahadsan tahay xiisaha.